“Waa innaga xulka kaliya ee raaxada ka qaada Spain.”. Goolhaye Gigi Buffon – Gool FM
“Waa innaga xulka kaliya ee raaxada ka qaada Spain.”. Goolhaye Gigi Buffon
Byare June 27, 2016
(France) 27 Juunyo 2016. Kabanka Talyaaniga Gigi Buffon ayaa ku sheegay xulkiisa inuu yahay xulka kaliya ee raaxada ka qaada Spain isla markaana bida inay dhibtoodaan.
Labada xul ayaa caawa fiidkii isku qaban doona gegada De France wareega 16-ka Euro 2016.
Talyaanigu kulan rasmi ah kama uu adkaan xulka Spain tan iyo koobkii adduunka ee 1994, iyadoo guushii waynayd ee ugu dambeysay uu Spain ka gaaro Azzurri ay ahayd 4-0 finalkii Euro 2012.
“Afartii kulan oo tartamo ee ugu dambeeyay, guul darada kaliya ee cad waxay ahayd Finalkii Euro 2012, sidaa darteed aragti ahaanteyda waxaan ahayn kuwa jir ahaan iyo dareen ahaanba bur-bursan iyadoona waqtigaa ay naga fiicnaayeen Spain,” Buffon ayaa sidaa ka yiri shirka jaraa’id.
“Saddexda kulan ee kale, waxay ahaayeen bar-baro oo ay ku jirto waqtiga dheeriga ah, sidaa darteed waxay caddeynaysaa midaa inaan dhibaato bidnay kooxda ugu fiican adduunka, waxaana dareensiinay joogitaankeena.
“Intii laguda jiray waqtigaa Spain wuxuu ku guuleystay wax kasta oo suuro gal ah, waxaana aaminsanahay oo iga dhaadhacdan in Talyaanigu yahay xulka kaliya ee sida dhabta ah raaxada uga qaaday iyaga.”.
Arturo Vidal oo ka xumaaday in Messi uu ka fariisto ciyaaraha caalamiga ah (Muxuu yiri?)
Kaddib is-casilaadii Messi waxaa isa soo taraya laacibiinta kale ee ka fariisanaysa ciyaaraha caalamiga ee xulka Argentina, Mascherano, Aguero iyo waliba…..